गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने सरकारी विद्यालय, जहाँ भर्ना पाउनै कठिन - Ratopati
गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने सरकारी विद्यालय, जहाँ भर्ना पाउनै कठिन
बुटवल– घटना तीन वर्ष अगाडिको हो । तर आज पनि यस क्षेत्रमा शैक्षिक विषयमा बहस हुँदा चर्चामा आउँछ ।
घटना यस्तो थियो, स्थानीय सृष्टि टण्डन सरकारी विद्यालयमा भर्ना हुन नपाएको भन्दै पुनरावेदन अदालत बुटवल पुगेकी थिएन् । विद्यालयले विद्यार्थी सङ्ख्या धेरै भएको भन्दै भर्ना नगरेपछि उक्त विषय पुनरावेदन अदालत बुटवलसम्म पुगेको थियो ।
टण्डन यसकारण अदालत पुगेकी थिइन, जहाँ उनी पढ्न चाहन्थिन्, उक्त विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर धेरै राम्रो थियो र छ । यो विषयमा तीन वर्ष अगाडि म आफैले रिपोर्टिङ गरेको थिएँ ।
यो कथा बुटवलको नवीन औद्योगिक माविको हो । यहाँ आज पनि भर्नाका लागि ठूलै कसरत हुन्छ । विद्यालयका प्राचार्य प्रेमबहादुर बस्नेत भन्छन्, ‘निजी विद्यालय छाडेर हामीकहाँ भर्ना आउने चापचाप हुन्छ’, उनले भने नयाँ शैक्षिक सत्र कति विद्यार्थीहरु आउँछन्, कतिले भर्नाका लागि नेतादेखि विभन्न शक्ति केन्द्रबाट फोन गराउँछन् ।’
गुणस्तरका नाममा निजी विद्यालयहरुको व्यापार फस्टाएको बेला एक छात्रा सरकारी विद्यालयमा भर्ना हुन लालयित थिइन्, जुन विषय अदालतसम्म पुग्यो ।
यो घटना किन उठान गर्न खोजिएको भने रुपन्देहीमा केही यस्ता सरकारी विद्यालय छन्, जसले निजी विद्यालयले भन्दा राम्रो शैक्षिक गुणस्तर दिएका छन् । आज हामी तिनै विद्यालय कसरी चलेका छन् भन्ने कथा पस्किँदैछौँ ।
रुपन्देही उद्योग–व्यापारसगै शैक्षिक गुणस्तरमा पनि अग्रस्थानमा हुने दौडमा छ । केही निजी विद्यालयले विगतमा एसएलसी परीक्षामा उत्कृष्ट अङ्क ल्याएर उपत्यका बाहिर पनि गुणस्तरीय शिक्षाका लागि राम्रो जिल्ला प्रमाणित गरेका थिए ।
करोडौँको लगानीमा निजी विद्यालय एकपछि अर्को खुल्ने क्रम जारी छ । तर केही सामुदायिक विद्यालयले शैक्षिक गुणस्तर ती निजी विद्यालयको भन्दा राम्रो छ । ती विद्यालय गुणस्तरीय शिक्षा दिलाउने शिक्षा केन्द्रको रुपमा स्थापित भएका छन् ।
बुटवल, भैरहवा, मणीग्राण जस्ता ठाउँहरुका निजी र सामुदायिक दुवै विद्यालयको सङ्ख्या उस्तैउस्तै छ । अझ सहरमा निजी विद्यालयको सङ्ख्या धरै छन् । बुटवलमा २–३ सय मिटरको दूरीमा निजी विद्यालयहरु भेट्टाउन सकिन्छ ।
यहाँका केही सरकारी विद्यालयमा पढेका विद्यार्थी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रि«य बजारमा प्रतिपर्धा गर्न पनि गएका छन् । अहिले अभिभावक राम्रा सामुदायिक विद्यालय खोज्दै हिँड्न थालेका छन् ।
हरेक वर्षको एसएलसीमा शतप्रतिशत उत्तीर्ण गराउन सफल हुँदै आएका जिल्लाका ४ वटा नमुना सामुदायिक विद्यालयबारे मैले जान्ने कोसिस गरेको थियो ।
बुटवल–१३ देवीनगरका रहेको नवीन औद्योगिक माविमा गत सोमबार बिहान ८ बजे म प्रवेश गरेँ । लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पससँगै जोडिएको नवीन औद्योगिक माविमा जाँदा गेटमा आफ्नो परिचयसहित सबै लेख्नुपर्दो रहेछ । सरकारी विद्यालयमा यस्तो कमै देख्न पाइन्छ ।
भित्र प्रेवश गर्दा गेटमा बसेका पाले दाइले रजिस्टरमा नाम, ठेगाना, कुन सरलाई भेट्ने आदि विवरण भर्न आग्रह गरे । मैले भेट्न खोजेका प्रधान अध्यापक प्रेमबहादुर बस्नेतको रुम देखाउँदै पालेले भने ‘सर त्यही रुममा हुनुहुन्छ, छिटै जानुहोस् । सरलाई भेट गर्नेहरु धेरै छन् ।’
जब बस्नेतको रुमतिर जाँदै गर्दा विद्यालयको एउटा भवन निर्माणको काम हुँदै थियो । मिस्त्रीहरु काम गर्दै थिए । केही साम्रगीहरु यत्रतत्र देखिन्थे ।
बस्नेतले सीसीटीभीबाट विद्यालयको कक्षा निरगानी गरेका थिए । बिहानी विशेष कक्षा चलेका थिए । कक्षा ८ भन्दा माथिका कमजोर विद्यार्थीहरु लागि विषेश कक्षा विद्यालयले चलाएको हो । केही शिक्षकले उत्तरपुस्तिका जाँचेर गरेर प्रअलाई बुझाउँदै थिए । शिक्षकहरुको दौडधूप, विद्यार्थीको बिहानै चहल पहल आदि हेर्दा लाग्छ– विद्यालयको भौतिक पूर्वधारसँगै शैक्षिक गुणस्तर राम्रो अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
वि.सं. २०३३ सालमा स्थापना भएको नवीन औद्योगिक उमाविले २०६४ सालबाट अङ्गे्रजी माध्यम पढाउन सुरु गरेको हो । सबै कक्षामा अङ्ग्रेजी र नेपाली माध्यमबाट पढाइ हुन्छ । सबै कक्षामा छुट्टा छुट्टै सेक्सन छन् ।
नवीनका सफल शैक्षिक अभ्यास
१. पाँचभन्दा माथिल्ला कक्षामा साँझ ४ बजेपछि अङ्ग्रेजी,गणित र विज्ञानको निःशुल्क कोचिङ कक्षा सञ्चालन
२. कक्षा ६, ७ लाई ४ बजेपछि विद्युतसम्बधी व्यावहारिक ज्ञान दिने कक्षा
३. नर्सरीका विद्यार्थीलाई निःशुल्क तहगत नेपाली श्रुतिलेखन, डिक्टेसन लेखन, माइन्युट लेखन
४. अङ्ग्रेजी र नेपालीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रशिक्षण दिई पुरुस्कारद्वारा प्रोत्साहित गर्ने
५. कक्षा ४ देखि ८ सम्म कम्प्युटर विषयको पाठनपाठन हुने
६. कक्षा १ देखि १० सम्म अङ्ग्रेजी माध्यममा पठन पाठन हुने र गृहकार्य डायरी लागू गरिने
७. विद्यार्थीहरु बाहिर जाँदा अनिवार्य गेट पास र शिक्षक बाहिर जाँदा लग बुकमा अनिवार्य लेखेर जानुपर्ने र बाहिरबाट आउँदा दार्ता गरेर मात्र आउनुपर्ने
८. विद्यालयको गतिवधि अनुगमन तथा निगरानीका लागि सीसीटीभी र २४ घण्टे सेक्युरिटी व्यवस्था र रातिमा समय सूचकको जानकारी दिने व्यवास्था
९. बालबालिका बिरामी हुँदा २ शय्याको प्राथमिक उपचार कक्ष
१०. शिक्षक उपस्थित जनाउन हाजिरी मेसिनको प्रयोग
११. प्राविधिक शिक्षाअन्तरगत सिभिल इन्जिनियरको पठन पाठन
कालिका माविलाई पहिले कारवाही अहिले पुरस्कार
वि.सं. २०१७ सालमा स्थापना भएको बुटवल–१२ कालिकानगरमा कालिका मावि कुनै बेला राष्ट्रिय परीक्षाफलमा १५% भन्दा कम ल्याई कारवाहीमा परेको विद्यालय हो । यो विद्यालय आहिले राष्ट्रकै उत्कृष्ट र नमुना विद्यालय बन्न सकेको छ ।
२०७१ सालको र २०७२ सालको एसएलसी परीक्षामा प्राविधिकतर्फ राष्ट्रिय प्रथम भई १ लाखसहित राष्ट्रिय झण्डा प्राप्त गर्न सफल थियो । विगत ३ वर्षयता ९०% भन्दा साधारणतर्फ परीक्षाफल प्राप्त गर्न सकेको छ । विद्यालयमा अन्य शैक्षिक गतिविधिले विद्यालय नमुना रुपमा चिनिएको छ ।
विद्यालय प्राचार्य घनश्याम पाठकले विद्यालयमा नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवै माध्यम पढाउन थालेपछि विद्यार्थीहरुको सुरुमा रोजाइ बनेको बताए ।
कालिकाले शिक्षा मन्त्रलायबाट प्राविधिक शिक्षातर्फ कम्प्युटर शिक्षा अध्ययन गराउँछ । जसमा विद्यार्थीहरुको थप आर्कषण बनेको हो ।
प्राचार्य पाठकको भनाइका प्रविधिक शिक्षा अहिलेका विद्यार्थीहरु अनिवार्य जस्तै छ । अर्को बजारले खाजेको शिक्षा दिनका लागि पनि हामीले कम्प्युटर शिक्षा राखेका हो । हाम्रा विद्यार्थीहरु देश विदेशमा राम्रो रोजगारी पाएका छन् ।
भौतिक पूर्वाधारमा के छन् ?
१. बुटवल १२ कालिकानगरस्थित दुई बिगाहा छ कठ्ठा जमिनमा छवटा भवन रहेको विद्यालयमा ७७ कोठा छन् । गत साल शिलान्यास भएको १५ कोठे नयाँ भवन सम्पन हँुदैछ ।
२. भारतीय राजदूतावासबाट १ र अर्थ मन्त्रालय भन्सार विभागबाट १% बाहेक अरु भन्सार महशुल छुट गरी विद्यालय आफैले १ गरी २ वटा विद्यालय बसको व्यवस्था गरेको छ ।
३. स्थायी प्रकारको कार्यक्रमको मञ्च र आवश्यकता अनुसार टीटी बोर्ड राखेर खेल्न मिल्ने गरि मञ्च निर्माण गरिएको छ ।
४. आधुनिक पुस्तकालय निर्माण गरिएकोमा त्यसैमा इ. लाइब्रेरी समेतको व्यवस्था गरिएको छ ।
५. प्रत्येक विषयका लागि १÷१ वटा प्रोजेक्टर र विज्ञानतर्फ ४ वटा र नयाँ भवनमा ४ वटा प्रोजेक्टर कक्षा कोठामै जडान गरिएको छ । जसले गर्दा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी अध्ययन अध्यापन गर्न प्रभावकारी उपाय बनाउने दाबी विद्यालयको छ ।
पुरानो तर चर्चित कान्ती मावि
२०१० सालमा स्थापना बुटवल ६ हाट बजार सञ्चालित कान्ती मावि जिल्लाको पुरानो विद्यालय मध्ये एक हो । पुरानो विद्यालय भए पनि ६५ सालदेखि शैक्षिक गुणस्तरमा तीव्र अगाडि आएको मानिन्छ ।
विद्यार्थीहरु शौक्षिक गुणस्तरलाई ध्यान दिएर कक्षा सञ्चालन गरेको विद्यालय अहिले ४ वटा ठूला भवन छन् ।
अन्य साना भवन पनि छन् । अङ्ग्रेजी नेपाली दुवै माध्यमबाट पढाइ हुने भएको निजी विद्यालय छाडेर कान्तीमा विद्यार्थीहरु आउने गरेका छन् ।
प्राचार्य गोविन्द ज्ञवाली भन्छन्– ‘विगतमा हाम्रा विद्यालयबाट निजी विद्यालयतिर विद्यार्थीहरु जाने गर्दथे अहिले उताबाट हाम्रो आउने गर्दछन् ।
नर्सरीदेखि कक्षा १२ सम्म २४ सय विद्यार्थी अध्यरत रहेका छन् अहिले शिक्षक कर्मचारी गरेर ८७ जना कार्यरत रहेका छन् । जसमा दरबन्दी कोटाबाट २३ जना शिक्षक छन् । विद्यालयका हाट बजार लाइनमा रहेका ३९ वटा सटर रहेका छन् ।
जसबाट मासिक ३ लाख रुपियाँ विद्यालयलाई आउने गर्दछ । प्राचार्य गोविन्द ज्ञवालीले निजीभन्दा राम्रो शिक्षा प्रदान गरेका दाबी गर्दछन् । मासिक फी तिर्न नपर्ने हुँदा कान्ती माविलाई विद्यार्थी र अभिभावकले छान्ने गर्दछन् ।
कान्तीले खुला विद्यालय पनि सञ्चालन गरेका छ । जसमा कक्षा ८ र १० भर्ना हुने विद्यार्थीका लागि बिहान क्लास सञ्चालन हुने गर्दछ । जिल्लामा एक मात्र खुला विद्यालय कान्तीले सञ्चालन गरेको हो ।
खुला विद्यालयको कक्षा ८ मा अहिले ३१ जना विद्यार्थीहरु छन् । कक्षा १० मा १२५ जना विद्यार्थीहरु रहेका छन् ।
कुनै बेला खुला विद्यालयअन्तर्गत कक्षा १० मा ६ सय ५० जनासम्म विद्यार्थीहरु भर्ना भएको ज्ञवाली भनाइ छ । यो विद्यालय बुटवलको मुख्य भागमा रहेको छ । पुरानो भए पनि बनेको शैक्षिक गुणस्तरका कारण चर्चित छ ।
२०७१ सालको एसएलसी परीक्षामा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा उत्कृष्ट देखाई प्रथम भएको थियो । नर्सरीदेखि कक्षा १२ सम्म अङ्गे्रजी र नेपाली दुवै माध्यमा कक्षाहरु सञ्चालन गर्दे आएको छ ।
प्रार्चाय ज्ञवालीको भाषामा विद्यालयमा राम्रा पक्षहरु यी हुन् :
१. वार्षिक कार्ययोजनासहित शैक्षिक क्यालेन्डर प्रकाशन
२. प्रत्येक कक्षामा विद्यार्थी आचारसंहिता निर्माण र पालान
३. फरक फरक ब्लकमा विद्यार्थीको तहगत बसाई व्यवस्थापन
४. प्रत्येक परीक्षा कपी परीक्षापछि विद्यार्थी, अभिभावकलाई कपी हर्ने लगाई पृष्ठपोषण
५. विद्यार्थीको सिर्जना सूचना पार्टीमा टाँस र बाल भित्तेपत्रिका प्रकाशन
६. शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकको संयुक्त बैठक राखी छलफल
७. अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन र होस्टलको व्यवास्था
८. विद्यालयले तीव्र प्रतिपस्र्धालाई निजी विद्यालयसग गर्नुपर्ने भएपछि अङ्ग्रेजी र नेपाली दुवै माध्यमबाट कक्षा १२ सम्म पढाइ हुने
९. विद्यालयमा शौचालय र खानेपानी कुनै निजी विद्यालयको भन्दा कम छैन । महिलामैत्री शौचालयको व्यवस्था
१०. विद्यालयमा शिक्षक कर्मचारीको राम्रो तलब सेवा सुविधा, जसका कारण शिक्षक कर्मचारीले दिनरात खटेर काम गर्दा प्रतिफल राम्रो भएको ।
नामजस्तै नमुना विद्यालय
रुपन्देहीको सामुदायिक विद्यालयमध्ये धेरै शिक्षाप्रेमीहरुले गुणगान गाउनेमध्ये अर्को विद्यालय पनि छ । तिलोत्तमा नगरपालिकामा पर्ने मणिग्रामा रहेको शान्ती नमुना विद्यालय राम्रो सामुदायी विद्यालय मानिन्छ ।
बुटवल भैरहवाको बीचमा पर्ने मणिग्राणबाट पश्चिमतर्फ ५ सय मिटर पर्ने उक्त विद्यालय नामजस्तै नमुना विद्यालय बनेको छ ।
विद्यालयका प्राचार्य कुलप्रसाद लामिछानेले मणिग्राणमा शान्ती नमुना विद्यालयले बोर्डिङ स्कुलभन्दा राम्रो शिक्षा प्रदान गरेको दाबी गर्दछन् ।
मणिग्राणमा निजी विद्यालयहरु पनि थुपै छन् । पछिल्ला वर्षहरु विद्यार्थी तथा अभिभावकहरुले शान्ती नमुनालाई रोजेका हुन् ।
विद्यालयमा अपाङ्गहरुका लागि छात्राबासको व्यावस्था गरेको छ । कक्षा १ देखि १० कक्षासम्म अध्ययन गर्ने आपङ्गहरुका लागि छात्रावासको व्यवस्था छ भने अङ्ग्रेजी र नेपाली दुवै भाषा माध्यमबाट कक्षा १२ सम्म अध्यपन हुने गरेको छ ।
विद्यालयको मुख्य आम्दानी जग्गा हो, विद्यालयका तीनवटा ठूला भवन र ३ वटा सना भवन छन् । ४० विघा जग्गा विद्यालयको नाममा रहेको छ । सोही जग्गाबाट वार्षिक ५० लाख रुपियाँभन्दा धरै आम्दानी हुने प्राचार्य लामिछाने खुलाए । अन्य सना आम्दानीका स्रोत पनि छन् ।
विद्यालयमा माध्यमिक तह पूरा गरेका विद्यार्थीलाई प्राविधिक शिक्षा अन्तर्गत सब ओभरसियर कक्षा सञ्चालनमा गरेको छ ।
मल्टिमिडियाबाट कक्षा सञ्चालन, सना बालबालिकाहरुका लागि ल्याबको विषेश व्यावस्था गरिएको छ ।
यस्तै, लोडसेडिङ मुक्त गर्नका लागि विद्यालयले १२ के.भी.ए.को सोलर जडान गरेको छ । जसबाट सबै कक्षामा गर्मीमा पङ्खा चलाउन सहज भएको छ ।
शान्ति नुमना विद्यालय स्रोत केन्द्र विद्यालय पनि हो । तिलोत्तमा नगरापालिका आसपासका ३७ वटा सामुदायिक विद्यालयहरुले एउटै शैक्षिक क्यालेन्डर लागू गरेका छन् । जसमा परीक्षा, बिदा, पाठ्यक्रम आदि समान रुपमा लागू गर्छन ।
विद्यालय आफैले चारवटा परीक्षा लिने गरेको छ । परीक्षाका उत्तरपुस्तिका र रिपोर्टकार्ड अभिभावकलाई दिने गरिन्छ । परीक्षापछि अनिवार्य पृष्ठपोषण व्यवस्था छ । शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन गरिएको छ । खासगरी प्रयोगात्मक कक्षा ध्यान दिएको विद्यालयको दाबी छ ।
मुख्य आयस्रोत जग्गाको व्यावसायिक प्रयोग
सरकारले रुपन्देहीसहित देशका पुराना केही विद्यालयमा जग्गा प्रदान गरेको छ । ती जग्गाको आयस्रोतबाट विद्यालय सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले सामुदायिक विद्यालयमा नाममा जग्गा प्रदान हो ।
रुपन्देहीका एक दर्जनभन्दा धरै विद्यालयका जग्गा विद्यालयको नाममा रहेको छ । जसमध्ये केही विद्यालयहरुले भवन बनाएर बाँकी रहेको जग्गा भाडामा दिने गरेका छन् ।
केही विद्यालयले व्यावसायी सटर बनाए भाडामा लगाउने गरेका छन् । व्यावसायिक योजनासहित विद्यालयले सटर तथा जग्गालाई भाडामा लगाएका छन् ।
यहाँ नाम चलेका सामुदायिक विद्यालयमध्ये नवीन औद्योगिक कदरबहादुर माविले बुटवल १३ देवीनगरमा बहादुर रायमाझीले भवन बनाए भाडामा लगाउँदा मासिक अहिले १ लाख रुपियाँ पाउने प्रार्चाय प्रेमबहादुुर बस्नेतले बताए ।
पुरानो तर चर्चित कान्ती विद्यालयको आयस्रोतको हकमा विद्यालयले ३९ वटा सटरहरु हाट बजारलाइन स्थापन भएका छन् । जसबाट मासिक ३ लाख रुपियाँ भाडाबाट विद्यालयले पाउने गर्दछ ।
यस्तै कालिका माविले पनि सिद्धार्थ राजमार्गसग जोडिएको कलिकानगरमा सटरहरु भाडा लागर आम्दानीको मुख्य स्रोत बनाएको छ । अर्को शान्ती नमुना विद्यालयले ४० बिघा जग्गा लिजमा प्रदान गरेको छ । यिनै आन्दानीलाई आधार बनाउँदै विद्यालयहरु आगडि बढेको पाइन्छ । पुरानो शैलीभन्दा व्यावसायिक रुपमा भवन तथा सटर निमार्ण गरेर विद्यालयहरुले आम्दानी थप्ने काम गरेका हुन् ।
विद्यालय व्यावस्थापन समिति गठन नहुँदा समस्या
शिक्षा विभागले माघ मसान्तभित्र सबै सामुदायिक विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति गठन गरिसक्नुपर्ने परिपत्र गरे पनि रुपन्देहीमा २५ वटा विद्यालयमा अझै समिति गठन हुन सकेको छैन ।
लामो समय विद्यालय व्यवस्थापन समिति नहुँदा विद्यालय भौतिक पूर्वधार तथा अन्य कार्यमा समेत प्रभाव परेको छ ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालय रुपन्देहीका अनुसार अहिले जिल्लामा ३ सय ८८ सामुदायिक विद्यालय छन् । जसमा २५ वटा जिल्लामा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि नाम चलेका विद्यालयहरु समिति गठन हुन नसकेको जिल्ला शिक्षा अधिकारी टेकबहादुर थापाले बताए ।
उनले स्थानीय निकायको निर्वाचन आचार संहिता लागू भएकाले अब निवार्चन नहुने तर सर्वसम्मत रुपमा आउने मान्यता दिने बताए ।
बुटवल १३ देवीनगरमा रहेको नवीन औद्योगिक मा.वि. बुटवल ६ मा रहेको कान्ति मा.वि., देवदह मा.वि.लगायत निर्वाचन हुन सकेको छैन । बुटवल १३ देवीनगरमा रहेको नवीन औद्योगिक माविका प्रधान अध्यापक प्रेमबहादुर बस्नेतले लामो समय व्यवस्थापन समिति विद्यालयको भौतिक निमार्णमा समस्या भएको बताए ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालयले समिति गठन नभएका विद्यालयमा अनुदान रोक्न सक्ने व्यावस्था रहेको छ । हाल जिल्लामा सामुदायिक विद्यालयमा १ लाख ३८ हजार ३८८ विद्यार्थीहरु अध्ययनरत छन् ।
जिल्ला शिक्षा अधिकारी टेकबहादुर थापा भन्छन– देशका अन्य विद्यालयहरु प्रेरणको स्रोत बन्नुपर्छ ।
रुपन्देही जिल्लाको शैक्षिक विकास स्थितिलाई ४७ सालको पहिले र पछि तुलना गर्दा प्रशस्त विकास भएको छ । तर आधारभूत क्षेत्रका परिसूचकहरुको अध्ययन गर्दा गर्नुपर्ने कामहरु धरै छ । जिल्लामा सामुदायिक ३६२, संस्थागत २८४, धार्मिक ११७ गरी जम्मा ७६३ विद्यालय रहेका छन् । अहिले बालबालिकहरुलाई सिकाउने विभिन्न अवसर छन् ।
स्थानीय शैलीदेखि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरु शिक्षकले कक्षा सिकाउन सक्छन् । सिकाइका विधाहरु र भैतिक संरचनाहरु उचित व्यवास्थपान गरेर काम गर्दा नमुना विद्यालय बनाएका हुन् छिल्ला वर्षहरुमा कालिका, नवीन, कन्ती, शान्ती नमुना विद्यालहरुले सामुदायिक विद्यालयमध्येबाट नमुना काम गरेका छन् र उनीहरुको सिकाइ प्रद्धिति देशका अन्य विद्यालयहरु प्रेरणको स्रोत बन्नुपर्छ ।
यस्तै, गजेडी गाविसमा रहेको प्रगति माविले पनि राम्रो शैक्षिक सुधार गरेको छ । ती सबै विद्यालयलाई नमुना विद्यालयका रुपमा शिक्षा कार्यालयले लिएको छ ।
यसरी नमुना सामुदायिक विद्यालय बनाउनको लागि सबैको स्पष्ट भिजन चाहिन्छ । प्रअ र व्यावस्थापन समितिले उक्त भिजनालाई कार्यान्वयन गर्न एकमत हुनुपर्छ । अनि शिक्षक कर्मचारीलाई पनि सँगै हिँडाउनुपर्छ । सामुदायिक विद्यालयहरुले स्थानीय समुदायलाई अपनत्व हुने गरी काम गनुपर्छ । अभिभावक, विद्यार्थी सबैलाई शैक्षिक लक्ष प्राप्त गर्न सँगै हिँड्ने वातावरण प्रअले बनाउनुपर्छ । प्रअ भिजनसहित खट्न सक्ने भएमा सामुदायिक विद्यालयलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ । यस क्षेत्रमा नमुना मानिएका विद्यालयका प्रअहरु बिहान ६ बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म विद्यालयमा खटेका छन् । यसैले सबैले गर्व गर्ने विद्यालय बनाएका हुन् । उनीहरुलाई हामी सबैको साथ छ ।
सामुदायिक विद्यालयमा सरकारले गरेको लागनीअनुसार कम प्रतिफल प्राप्त भएको आरोप लागिरहेका बेला यी विद्यालयले सबैले प्रसंशा बटुलेका छन् ।
बुटवलवासीको शान : यस्तो बन्दैछ २७ किलोमिटर ‘सिक्स लेन’ सडक